HomeWararka MaantaEthopia oo Sheegtay inay Qaadayso Wajigi Labaad ee Dagaal ka Dhan ah Tigreey
January 23, 2022 Wararka Maanta, Wararka Caalamka 0
Milateriga Itoobiya ayaa qorsheynaya in ay gudaha u galaan caasimadda gobolka Tigray ee Mekelle ayna ka takhalusaan xoogagga TPLF, sida uu REUTERS u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan milatariga, iyadoo talaabadan ay ku soo aadeyso xili ay socdaan dadaallo diblumaasiyadeed oo lagu soo afjarayo colaadda waqooyiga dalkaas.
Dalka Geeska Afrika waxaa ka socda dagaallo muddo ka badan hal sano ka socday, iyadoo ciidamada federaalka iyo xulafadooda ay la dagaalamayaan ciidamada daacadda u ah xisbiga Tigray People’s Liberation Front (TPLF) oo ah xisbi siyaasadeed oo ka taliya Tigrayga.
Toddobaadkan laba dublamaasi oo Maraykan ah ayaa u duulay Addis Ababa si ay u riixaan xabbad-joojin, iyagoo isku dayaya inay xal nabadeed ka dhaadhiciyaan dhinacyada oo dhan.
Taliye ku xigeenka ciidamada difaaca Itoobiya General Abebaw Tadesse oo waraysi siinayay warbaahinta ku hadasha afka dawlada ee Fana ayaa sheegay in ay sii wadayaan dagaalka ilaa kooxda TPLF ay meesha ka saarayso.
Koobfurgalbeed oo Markale Shaacisay Kuraas Ka Mid Noqon Doona Golaha Shacabka